Edị E-Azụmahịa E-E Si Kwesịrị Adoma | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 4, 2019 Wednesday, October 28, 2020 Aha ya bụ Laura Himmer
E-azụmahịa ụlọ ọrụ na-atụ anya na-eto eto na-aga n'ihu na-abịa afọ. N'ihi ọganihu na teknụzụ na mgbanwe na mmasị ịzụ ahịa ndị ahịa, ọ ga-esi ike ijide ogige. Ndị na-ere ahịa nke ejikere nke ọma na usoro ọhụụ na teknụzụ ga-aga nke ọma ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-ere ahịa. Dị ka akụkọ si Statista, E-commerce na-ere ahịa zuru ụwa ọnụ ga-erute $ trillion $ 4.88 site na 2021. N'ihi ya, ị nwere ike iche n'echiche ngwa ngwa ahịa ga-agbanwe site na iji teknụzụ kachasị ọhụrụ.
Mmetụta Ọrịa Na-emetụta Ọrịa Rlọ Ahịa na E-Azụmaahịa
Ndị na-ere ahịa US na-aga imechi ihe ruru puku ụlọ ahịa 25,000 n'afọ a dịka oria ojoo coronavirus kwadoro omume ịzụ ahịa. Nke ahụ karịrị okpukpu abụọ karịa ụlọ ahịa 9,832 nke mechiri na 2019, dị ka Coresight Research si kwuo. Ka ọ dị afọ a, nnukwu agbụ US ekwuola ihe karịrị 5,000 na-adịgide adịgide.
Tinyere egwu nke ọrịa ahụ, mkpọchi obodo emeela ka ndị na-azụ ahịa gbanwee ihe n'ịntanetị. Lọ ọrụ ndị a kwadebere ma ọ bụ gbanwere ngwa ngwa n'ịntanetị agafeela n'oge ọrịa ahụ na-efe efe. Ma o yighị ka ngbanwe a na akparamagwa ga-alaghachi azụ ka ụlọ ahịa mkpọsa mepere ọzọ.
Ka anyị leba anya n'ụfọdụ usoro azụmahịa e-commerce nke ị kwesịrị ịgbaso.
The 2018 State nke E-Ahịa Commerce Report chọpụtara na 16.4% nke ụlọ ọrụ ecommerce na-eji mbupu mmiri si na ụlọ ahịa ntanetị 450. Mbupu ụgbọ mmiri bụ usoro azụmaahịa dị irè iji belata ọnụahịa ndị mepụtara ma nwekwuo uru gị. Ulo oru ndi nwere obere ego na-erite uru site na ihe nlere a. Thelọ ahịa dị n'ịntanetị na-arụ ọrụ dị ka onye etiti n'etiti ndị na-ebu ngwaahịa na ndị zụrụ ihe.
N'okwu dị mfe, ọ bụ gị na-ere ahịa na ire ere ka ndị na-arụ ọrụ na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo. Yabụ, ị na-echekwa ego na mbupu yana, na ijikwa ngwa ahịa ụlọ ahịa ma ọ bụ njikwa njikwa ya.
Na ụdị a, ndị na - ere ahịa ọnlaịnụ nwere ọghọm pere mpe yana uru ka mma ka ị ga - azụ ngwaahịa ahụ naanị mgbe onye ahịa gị debere iwu. Ọzọkwa, ọ na-ebelata ụgwọ isi. Ndị na-ere ahịa E-commerce ndị na-eji usoro a eme ihe ma nwee nnukwu ihe ịga nke ọma bụ Home Depot, Macy na ole na ole.
Azụmaahịa ọnlaịnụ nke na-eji ahụmịhe ụgbọ mmiri na-emefu ndapụta ntinye ego nke 32.7% ma nwee nkezi ntụgharị ntụgharị nke 1.74% na 2018. Site n'ụdị uru a, ahịa e-commerce ga-ahụ ọtụtụ ụdị mbupu mbubata na afọ ndị na-abịanụ.
Internetntanetị dị mfe ịnweta ọtụtụ ụwa, mana ndị na-azụ ahịa na-eji ọtụtụ ọwa iji zụọ ahịa. N'ezie, dị ka Omnichannel yingzụta Report, ihe dị ka 87% nke ndị na-azụ ahịa na United States bụ offline ndị ahịa.
78% nke ndị na-azụ ahịa kwuru na ha zụrụ ihe na Amazon
45% nke ndị na-azụ ahịa zụrụ site na ụlọ ahịa akara n'ịntanetị
65% nke ndị na-azụ ahịa zụtara site na ụlọ ahịa brik na-ngwa agha
34% nke ndị na-azụ ahịa zụrụ ihe na eBay
11% nke ndị na-azụ ahịa zụrụ ahịa site na Facebook, mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya f-azụmahịa.
Na-elele ọnụ ọgụgụ ndị a, ndị na-azụ ahịa nọ ebe niile ma na-ahọrọ ịnweta ngwaahịa na n'elu ikpo okwu ọ bụla ha nwere ike ịchọta gị. Ohere nke ịnọ na ịnweta site n'ọtụtụ ọwa nwere ike ịkwalite azụmahịa gị na nnukwu ego. More na ndị ọzọ online Jeriko na-atụgharị kwupụta n'ikuku ana enweta n'otutu-ọwa na-ere… ị kwesịrị dị ka mma.
Ọwa ndị a ma ama gụnyere eBay, Amazon, Shozụ ahịa Google, na Jet. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze dị ka Facebook, Instagram, na Pinterest na-agbanwe ụwa e-azụmahịa na ọchịchọ ya na-arịwanye elu.
Omumu ihe na Ụlọ Akwụkwọ Baymard achọpụtala na ihe dịka 70% nke ụgbọ ibu azụmahịa gbahapụrụ na 29% nke ịgbahapụ agbahapụ na-eme n'ihi usoro ndenye ego dị ukwuu. Onye ahịa gị, nke kwadebere nke ọma ịzụrụ, gbanwere obi ha n'ihi usoro (ọ bụghị ọnụahịa na ngwaahịa). Kwa afọ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-efufu ndị ahịa n'ihi usoro ịzụ ogologo ma ọ bụ nke siri ike.
Na 2019, a na-atụ anya ka ndị na-ere ahịa dozie ọnọdụ a nke ọma na ndenye ọpụpụ na usoro ịkwụ ụgwọ dị mfe. Ndị na-ere ahịa n’ịntanetị ga-aga n’ihu iji melite usoro ndenye ọpụpụ ha na-eme ka ọ bụrụ nke nwere nchekwa, dị mfe, na nke dị mfe maka ndị ahịa ha.
Ọ bụrụ n ’ị nwere ụlọ ahịa dị n’ onlinentanet na-ere mba niile, ọ bara uru ịnwe nhọrọ ịkwụ ụgwọ mpaghara maka ndị ahịa gị zuru ụwa ọnụ. Zọ kachasị mma bụ ịkwado ịkwụ ụgwọ gị n'otu ikpo okwu, na-enye usoro ịkwụ ụgwọ dị mma nye ndị ahịa gị n'akụkụ ụwa niile.
Ahụmahụ Ndị Onwe
Na-emeso ndị ahịa gị ihe pụrụ iche bụ isi ihe gaziere gị na azụmaahịa ọ bụla. Na ụwa dijitalụ, onye ahịa nwere afọ ojuju bụ usoro ịzụ ahịa kachasị dị irè. Nweta na ọwa ọ bụla ezughị, ị ga-amata onye ahịa gị na ikpo okwu ọ bụla ma nye ha ọgwụgwọ pụrụ iche dabere na akụkọ ihe mere eme ha na gị.
Ọ bụrụ na onye ahịa nke gara leta akara ngosi gị na Facebook, dịka ọmụmaatụ, na-eleta webụsaịtị gị, nye ahụmịhe ndị ahịa ahụ dabere na nzute ikpeazụ ha nwere. Kedu ngwaahịa ị na-egosipụta? Gịnị ka unu na-atụle? Ahụmịhe ọwa-enweghị ebe ị ga-enwe ga-eme ka njikọ na ntụgharị dị ukwuu.
Dị ka ọmụmụ Evergage si kwuo, naanị 27% nke ndị na-ere ahịa na-emekọrịta ọkara ma ọ bụ karịa nke ọwa ha. N'afọ a, ị ga-ahụ ịrị elu na ọnụ ọgụgụ a ka ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya na-elekwasị anya na AI iji mata ndị ahịa ha na ọwa dị iche iche. Nke a ga - abụ otu n’ime ụdị azụmahịa e-commerce kachasị ewu ewu na 2019 nke ị kwesịrị ịnakwere.
Otu Ndụmọdụ Ecommerce Ikpeazụ
Ndị a bụ atụmatụ aghụghọ e-commerce na-ewu ewu na-eso n'afọ ndị na-abịanụ. Nọgide na-emelite na teknụzụ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka azụmahịa gị n'ịntanetị na-aga n'ihu n'ọdịnihu. Nwere ike ịga n’ihu mgbe niile site na igbo mkpa ndị ahịa gị. Jide n'aka na ị nyochaa ndị ọbịa gị ka ị chọpụta otu ị si eme n'ịntanetị. Inwe nzaghachi oge site na ndị ahịa na-enweghị atụ nwere ike inye gị nghọta dị ukwuu banyere ọnọdụ azụmaahịa gị n'ahịa.
Tags: amazonulo akwukwo baymardBigCommercendenye ọpụpụ usorotụfuo mbupuebayecommerce ndenye ọpụpụusoro ecommercemultichannel na-erekeonwePinterest